U-Alzina Zondi – The Ulwazi Programme
Kuncane kakhulu okulotshwe ngo-Alzina Zondi, kodwa ngaphandle kwabesilisa nabesifazane abanjengo-Alzina, inkululeko yaseNingizimu Afrika ibingeke nje yenzeke. U-Alzina ungomunye wabantu abayizinkulungwane eziyizinkulungwane zabantu ababeka impilo yabo engcupheni ukuze bamele lokho abakholelwa kukho. Wayengomunye wabesifazane abayizinkulungwane ezingamashumi amabili abamasha baya e-Union Buildings ePitoli bebhikishela imithetho ecindezelayo yamapasi. Ekhuluma ngalesi sikhathi u-Alzina ulandisa ukuthi bangaki abesifazane ababethwele ‘izingane’. “Okwahlekisa ukuthi lezi zingane azizange zikhale nakanye phakathi naso sonke leso sidumo”, kusho u-Alzina njengoba echaza ukuthi iningi labesifazane laliphethe umugqa oyisigaxa nomqamelo ngethemba lokuthi lizobavikela ekushayweni ngamaphoyisa. Futhi lesi yisikhashana nje esisodwa sezinkumbulo zokuphila u-Alzina anazo ngeminyaka eminingi alwa nohulumeni wobandlululo. Igama lika-Alzina liyavela embikweni weKhomishini yeQiniso nokuBuyisana lapho uNomzamo Nyawose elandisa ngendlela u-Alzina amnakekela ngayo eSwazini lapho abazali bakhe babedingiselwe khona. Kwakungu-Alzina okwakufanele atshele uNomzamo ukuthi abazali bakhe babulawa ‘amabhunu’. “Bengisondelene kakhulu no-Alzina Zondi. Ngacishe ngacabanga ukuthi ungumama wami”.
Ngemuva kokuphothula ibanga lakhe lesi-8 ngasekupheleni kwawo-1920, u-Alzina Zondi wasuka eMgungundlovu waya eThekwini wajoyina umzabalazo wenkululeko. Wathengisa iphephandaba i-New Age emarenki amatekisi kanti ngemuva kwalokho wayesezibandakanya nabanye abantu besifazane kwi-African National Congress, ikakhulukazi kubadayisi abathengisa impahla emarenki amatekisi.
Ngawo-1950, u-Alzina wabamba iqhaza esikhathini esibucayi somlando womzabalazo KwaZulu-Natali, futhi waziwa njengesiqhwaga esifundeni. Ngezi-9 Agasti 1956 waba ngomunye wabesifazane abangaphezu kwama-20 000 abafaka isicelo kuNdunankulu wangaleso sikhathi, uJ. Ukuqina, phezu komthetho ophoqa abesifazane ukuthi baphathe.
Ubushoshovu bakhe kwi-African National Congress babungesikhathi esinzima emlandweni wenhlangano, lapho amalungu ayeshushiswa ngokuboshwa, isikhathi esejele nokubulawa kaningi kwezishoshovu. Izelamani zika-Alzina zikukhuthaze kakhulu ukuzibophezela kwakhe emzabalazweni, futhi kaningi befuna ukuthi ashiye ezepolitiki, njengoba besabela impilo yakhe. U-Alzina waphikelela ezinkolelweni zakhe, nokho, njengoba ayekholelwa ukuthi uzosiza ekubuseni umbuso wobandlululo. Okuxakayo ukuthi u-Alzina ukuphela kwengane yakwaZondi esaphila nanamuhla.
Ukubandakanyeka kwakhe emzabalazweni wenkululeko kweza nezindleko ezinkulu zika-Alzina, kubandakanya nomshado wakhe. Omakhelwane bakhe bebengahambisani nokubandakanyeka kwakhe emzabalazweni, njengoba eletha ukunakwa okungafuneki kwamaphoyisa obandlululo kule ndawo, kanti ezinye izakhamizi zaze zakhaphela indawo yakhe emaphoyiseni ukuze kube lula ukuboshwa kwakhe. Izingcindezi ezinjalo, kuhlangene nokuchitheka komshado wakhe, kwaphoqa u-Alzina ukuba ashiye iNingizimu Afrika ayedingiselwe eSwaziland.
Ngo-1970, ngenxa yokusebenza kwakhe okuqhubekayo ne-ANC ngaphansi komhlaba, izikhulu zaseSwazini zazisa uZondi ukuthi kuzofanele ashiye i-Swaziland, zamnika amahora amathathu kuphela ukuthi aqoqe izimpahla zakhe ahambe kuleli. Ukusuka lapho waqala wathuthela eTanzania, Zambia nase-Zimbabwe, ngaphambi kokuba abuyele eNingizimu Afrika ngeminyaka yama-1990, ngemuva nje kokuthi wonke amaqembu ezepolitiki engavunyelwe.
Ngaphandle kokukholelwa okukhulu nesibindi esiboniswe ngu-Alzina igama lakhe alibonakali kumarekhodi omlando waseNingizimu Afrika. Yibo kanye laba bantu ‘abajwayelekile’ Ulwazi Programme olufisa ukubahlonipha, ukuze bakwazi & nbsp; ukubonga nokubonga ngeminikelo ebabazekayo abayenzile emphakathini.